Somalia: Raysalwasaare Kheyre muxuu ku soo arkey degmada Dayniile ee uu booqdey? - Wargane News
Home Somali News Somalia: Raysalwasaare Kheyre muxuu ku soo arkey degmada Dayniile ee uu booqdey?
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa booqasho ku tegay degmada Dayniile ee duleedka Muqdisho, isagoo u kuurgalay xaaladaha amniga iyo arrimaha bulshada ee degmada ka jira, waxana uu Mudanuhu warbixino ka dhegaystay masuuliyiinta iyo dadweynaha degamada. Booqashadan ayaa qayb ka ah dadaalada uu Ra’iisul Wasaaruhu xilliyadii ugu danbeeyey kor ugu qaadayey shaqooyinka dawladda iyo adeegyada loo fidiyo dadweynaha Soomaaliyeed.
Dayniile ayaa la sheegaa in ay kamid tahay goobaha al-Shabaab ay ku dhuumaaleystaan guryo qarsoodi ahna ku leh.
Muddane Xassan Cali Khayre
Deg-Deg: Cabdi Good Oo Kabaha La Dul-Maray Fanaaninta Nasteexo Indho Iyo Safwaan Iyo Kiin Jamac + Muuqaal